Welcome to Kalafoge Web Design and Hosting
KaLaFoGe Web Design & Hosting
Kalafoge Web Design waa shirkad dhisto naqshadaha website-yada kuwii hore, kuwii dhexe, iyo kuwii ugu danbeeyay, waxaa ka howl galo qabiiro in mudo ah kusoo dhex jirtay sida loo maareeyo websiteyada nooc walbo aay ahaadaan.
Kalafoge Web Design wuxuu kuu fududeynayaa inaad dib u casriyeeyso website-kaaga, oo aad iska badasho naqshadii hore naqshadaha u danbeeyayna aad saarato.
Kalafoge Web Design waxaad ka heleeysaa naqshadaha lagu dhisay HTML, PHP, JOOMLA, WORDPRESS, waxaa intaasi kuu dheeri ah inaad adigu naqshada qaabka aad u rabto dagsaneysid isla qaabkaas laguugu dhisayo.
Hadii aad ka heshay website naqshada iyo qaabka uu u dhisanyahay hadaba lasoo xiriir KALAFOGE WEB DESIGN oo kuu fududeynayo isla qaabkaasi inaad hesho……..
Kalafoge Web Design oo ah goob aad ka heli karto naqshad walbo midii aad daneyneeysid waxaad kala xidhiidhi kartaaa.
Kalafoge Web Design And Hosting Waxaad Ka Heli Kartaa hosting baaxad weyn oo aad kuu qanciyo xawaaraha webkaagana saa'idinayo, waa hosting aad isku haleyn karto faa'idadiisana aad dareemi karto markii aad noqoto isticmaale ka mid...
Runtii Kalafoge Design Waxey Ii Dhiseen website la yaqaano howl fiicana weey ii qabteen arinkaasina aad baan ugu mahad celinayaa waa Team aad iyo aad shaqadooda ugu firfircoon
-- Muktar Ahmed
Copyright @ 2014, KaLaFoGe Web Design & Hosting, All Rights Reserved